“13 mey” : Efa zatra milalao faty -
AccueilRaharaham-pirenena“13 mey” : Efa zatra milalao faty
Manana ny soatoavina feno isika Malagasy, ary mbola fomba fiteny ho firariantsoa aza ny hoe “ho ela velona”, raha toa tojo amin’ ny famangiana na ihany koa fitsidihana havan-tiana amin’ ny fotoana rehetra. Noho izany ny mifanohitra amin’ ireo voalaza ireo dia tsy fomba na ihany koa tsy soatoavina malagasy velively, satria ny olona maniry ho faty olona iray izany amin’ ny Malagasy dia mpamosavy. Ny faran’ ny herinandro lasa teo mantsy dia nisy ny vatam-paty izay narahin’ ireo tovovavy manao akanjo volomparasy natoby teo amin’ny kianjan’ ny 13 mey nandritra ny hetsik’ireo solombavambahoaka 73, ary hita tamin’ ny sora- baventy teo amin’ io vata io ny anaran’ ny filoham-pirenena malagasy. Tsy izay ihany fa ny fiara izay nitondran’izy ireo io vata io dia natao tahaka ireny fiara fitondrana razana ho alevina ireny mihitsy. Midika izao fihetsika izao fa tsy araka ny tokony ho izy intsony ny fihetsika tanterahin’ ireto solombavambahoaka mirary loza ho an’ ny mpiray tanindrazana aminy.
Raha ny zavatra hita aloha dia mampametra-panontaniana ihany, satria efa nisy razana roa efa nentin’ ireto depiote ireto teny amin’ ny 13 mey, ary izao indray dia misy vatam-paty hafa indray. Midika ve izao fa efa zatra milalao faty ireto solombavambahoaka ireto, ary tsy misy vidiny ho azy ireo ny aina. Raha ho an’ ny Malagasy mpiray tanindrazana mantsy dia tsy fomba fanao izany. Ka noho izany dia azo raisina fandrahonana, na ihany koa firarian’olona ho faty izao fihetsika izao ka azo atao tsara ny mitory ireo tompon’andraikitra. Mampanahy ve ihany noho izany ity hetsiky ny solombavambahoaka ity, satria raha izao no mitohy dia ireo mpanara-dia azy ireo mihitsy no irariany amin’ ny ratsy, mba hampahomby ny hetsika fitadiavan-tseza izay ataon’izy ireo amin’izao fotoana izao. Noho izany dia tokony homailo avokoa ireo Malagasy rehetra manoloana izao fihetsika mamohehitra atao imasom-bahoaka izao.